Xog culus odowa iyo tiicey oo kursiga beesha saleman loolan adag ugu jira iyo lacago badan oo cadaado soo galay | HOBYOMEDIA
Home WARARKA GALMUDUG Xog culus odowa iyo tiicey oo kursiga beesha saleman loolan adag ugu...
Madaxweynihii hore ee maamulka Ximan iyo Xeeb Maxamed Aadan Tiiceey oo laga og yahay qeybo kamid ah deegaanadda Galmudug markii ay dadku ahaayeen maamul la’aan ayaa hadda isku soo sharaxay xilka Xildhibaannimo oo uu ku matalayo Reer Cadaado.
Tiicey ayaa ku dagaal tagaya hal ku dhigga ah (Waxqabad lasoo tijaabiyey) taasoo ka dhigan in dadka mar kale la xasuusiyo siduu dowladnimada iyo nidaamkeeda uu ugu soo dabaalay maamulkii uu hoggaamin jiray.
Mar ayaa loo xiray inuu ahaa hogaamiye naas muujiyey burcad badeeda Soomaalida inkastoo sanado uu Dalka dibadiisa ku xirnaa lasoo daayey.
Magaalada Cadaado ayaa lacag badan ku wajahan tahay oo la doonayo in lagu kala jiito ergada xildhibaanada soo dooraneysa.
Xildhibaanimada Beesha reer xaaji saleebaan ayaa sanadkaan hardan adag loo geli doonaa xilli odawaa heysto kalsooni dib usoo laabasho.
Previous articleAkhriso maxaa sababay in Qoor Qoor & Lafta-gareen ay Muqdisho isaga tagaan & Ujeedka
Next articleXog cusub oo laga helay Safar Qarsoodi ah oo uu DENI ku tegay Imaaraadka Carabta + UjeedkaIch